Yocingo ihlaziywa ngengxoxo ezigciniweyo kunye nemisebenzi emitsha | I-Androidsis
I-Telegram ihlaziywa kunye noyilo olutsha kunye neengxoxo ezigciniweyo, phakathi kwezinye izinto eziphuculweyo
I-Telegram ihlaziywa kwakhona. Njengesiqhelo kwenzeka rhoqo kwiiveki ezimbalwa, usetyenziso lomyalezo lubonisa uhlobo olutsha, kule meko 5.6. Kuyo sifumana uthotho lophuculo kunye notshintsho. Inkqubo isandula ukwazisa imisebenzi emitsha, njengokucinywa komyalezo ongcono. Ngeli thuba sifumana utshintsho kuyilo lwayo, ukongeza kumandla okugcina iingxoxo, phakathi kwabanye.
Le nguqulo yesicelo Isungulwe ngokusesikweni ukusukela izolo. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba uninzi lwabasebenzisi beTelegram kwi-Android sele bonwabele olu tshintsho kwisicelo esidumileyo. Sikuxelela ngakumbi ngazo zonke ezantsi.
1 Iingxoxo zoVimba
2 Vimba iintshukumo
3 Uyilo olutsha
4 Olunye utshintsho kwiTelegram
Utshintsho lokuqala esilufumana kwiTelegram kukugcina kungxoxo. Ukusukela ngoku ukuya phambili, sinakho ukubanakho ukugcina kwiincoko zethu kwisicelo. Ngale ndlela, le ncoko imisiwe kwiscreen esikhulu. Iincoko esizigcinayo zisiwe kwicandelo elikhethekileyo, izingxoxo ezigciniweyo. Indlela elungileyo yokungabinabo kweso sikrini, kodwa ngaphandle kokucima.
Kwimeko apho sifumana isaziso kwingxoxo esele siyithethile, iya kuboniswa kwakhona kwiphepha lokuqala. Oku kuthintelwe kuphela ukuba siyicimile le ncoko. Ngale ndlela iya kugcinwa kwifayile ngalo lonke ixesha. Ukugcina ingxoxo kwiTelegram kufuneka swayipha ngasekhohlo, njengoko kubonisiwe kwi-GIF apha ngasentla.
Umsebenzi wesibini omkhulu wokuba uhlaziyo lweTelegram lusishiyile Zizenzo zebhloko. Ngombulelo kweli nqaku, sinokufaka amanyathelo kwiingxoxo ezininzi kwisicelo ngaxeshanye. Ke ukuba sifuna ukuwagcina, siwasuse, okanye sithule iincoko ezininzi kwi-app, sinokuyenza ngoku ngesenzo esinye.
Inye kuphela into ekufuneka yenziwe kule meko kukuphawula iincoko, ngokubambelela kubo. Ke, xa sikhethe abo sifuna ukwenza isenzo esithile, kuya kufuneka sijonge ngaphezulu kwescreen kwiTelegram. Kuya kubakho iindlela ezininzi ezinokuthathwa.
Sifumana uyilo olutsha ngaphakathi kwesicelo, kwezinye iindawo. Kwelinye icala, i icon yeTelegram iyayitshintsha inkangeleko yayo. Ukongeza, ngaphakathi kwesicelo sinokubona ukuba kukho utshintsho oluthile kuthotho lweemenyu, ukongeza kwezinye izinto, eziye zalungisa nembonakalo yazo nakweyiphi na imeko.
Eyokuqala kukuba imenyu yokwabelana ivuselelwe. Imenyu entsha iyaziswa, apho sinokukhetha khona abamkeli esinokwabelana nabo ngomyalezo okanye kwifayile ebuzwayo ngendlela elula. Iya kukuvumela ukuba ukhethe kakuhle aba bantu. Kwelinye icala, sifumana ulwazi ngakumbi kuluhlu olwandisiweyo lweengxoxo. Itelegram iya kusinika ukhetho phakathi kokubonisa imigca emibini okanye emithathu yesicatshulwa kule meko. Ngamnye unokuyiqwalasela ukuthanda kwabo kule nkalo.
Olunye utshintsho kwiTelegram
Ekugqibeleni, Ucingo luye lwazisa notshintsho kwimisebenzi yalo, yenzelwe ukunika usetyenziso olungcono lwesicelo ngawo onke amaxesha. Olu lutshintsho oluthile oluncinci, kodwa lunokwenza xa sisebenzisa usetyenziso siqaphela amava angcono.
Eyokuqala kwezi zinto kukufumana i-inshurensi yabamkeli ngaphambili dlulisela umyalezo komnye umntu kwi-app. Ukongeza, ukusukela ngoku ukubanakho kokuthumela imiyalezo evela kumaqela abucala njengekhonkco sele ingenisiwe kwiTelegram. Nangona ingabantu kuphela abathathe inxaxheba kwiqela elithile abaya kuba nakho ukufikelela kule khonkco. Sinokubona ukuba ngubani odibene namaqela engxoxo ngaphakathi kwesicelo.
Uyigcina njani imiyalezo kwiTelegram
Lonke olu tshintsho sele lusemthethweni kwiTelegram 5.6. Ukuba isicelo usifakile kwifowuni yakho ye-Android, kwezi yure zidlulileyo sele iqalile ukusetyenziswa. Ke kufanelekile ukuba sele unayo, okanye iza kungekudala. Kuyenzeka ukuba uhlaziye ukusuka kuGoogle Play.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Telegram ihlaziywa kunye noyilo olutsha kunye neengxoxo ezigciniweyo, phakathi kwezinye izinto eziphuculweyo
I-WhatsApp izakuyeka ukusebenza kwezi mobiles kwisithuba esingaphantsi konyaka
Isamsung iveze idatha ethe-ethe, iziqinisekiso kunye neekhowudi zemithombo yeeprojekthi ezininzi eziphambili